एनी फ्रान्क हाउस | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | एम्स्टर्डम, के हेर्ने
हामी सबैको कथा सुनेका छौं अन्ना फ्रान्क। कुनै न कुनै तरिकामा, पुस्तक पढेका थिए, फिल्मका लागि, केही वृत्तचित्रका लागि वा केवल यो किनभने कसैले दोस्रो पटक यसको बारेमा बोलेको थियो जब दोस्रो विश्वयुद्धको विषय एक वार्तामा देखा पर्‍यो।
नाजी आतंकले आनाको परिवारलाई एउटा घरमा लुकायो एम्स्टर्डम र आज त्यो घर सार्वजनिक रूपमा खुल्ला छ एनी फ्रान्क हाउसशहरको सबैभन्दा भ्रमण गरिएको संग्रहालयहरूको रूपमा पाउँदै। के तपाईं एम्स्टर्डम जाँदै हुनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईंले उसलाई भ्रमण भुक्तान गर्न रोक्न सक्नुहुन्न।
1 अन्ना फ्रान्क
2 एनी फ्रान्क हाउस
3 डायरी र संग्रहालय
उहाँको नाम थियो एनेलिज मारि फ्रान्क र जन्म भएको थियो फ्रान्कफर्ट मा 1929 शहरमा किताब पसल भएको उदार यहूदी दम्पतीको काखमा। तर १ 1933 XNUMX को चुनावमा नाजी पार्टीको जीत पछि, चीजहरू परिवर्तन हुन थाले र बुबाले एम्स्टर्डममा रोजगार प्रस्ताव स्वीकार्ने निर्णय गरे.
त्यहाँ उसले एउटा कम्पनीको हेरविचार गर्‍यो जसले फलफूलबाट निकालेको सामान बेच्थ्यो र त्यसको केही समयपछि परिवारसँगै बसोबास गर्दै उनले मसला र जडिबुटीको बिक्रीमा समर्पित अर्को कम्पनीको आयोजन गरे।
तर १ 1942 XNUMX२ मा जर्मनीले नेदरल्याण्डमा आक्रमण ग inv्यो र पेशा सरकारले अलग्गै कानूनहरू लागू गरेर यहूदीहरूलाई सताउन थालेपछि त्रास फैलियो। अन्य यहूदीहरू जस्तै फ्रान्कहरू पनि बसाइँ सर्ने सोचमा थिए तर उनीहरूको योजनालाई कार्यान्वयन गरेनन्। त्यसोभए, त्यस जोडीका दुई छोरीले स्कूलहरू परिवर्तन गर्नुपर्‍यो र पारिवारिक व्यवसायले मालिकलाई परिवर्तन गर्‍यो ताकि जफत नगर।
उनको १th औं जन्मदिन मा आना एक अटोग्राफ पुस्तक प्राप्त गर्‍यो र त्यो उनको भएको पुस्तक थियो व्यक्तिगत डायरी। जुलाईमा एउटा यातना शिविरमा जाने आदेश पाएपछि परिवारले उनको जन्मदिनको एक महिना पछि लुक्ने निर्णय गरे।
स्पष्ट छ तिनीहरू कम्पनीको कार्यालयहरूको माथि तीन-तला भवनमा लुकेका थिए उनको सबैभन्दा वफादार कर्मचारीहरु को छाता अन्तर्गत। उनीहरूले आफ्नो घर छोडे जसरी उनीहरु अचानक भागेका थिए र पुस्तकको शेल्फको पछाडि चतुराईले लुकाइएको कोठा लिए।
केवल तीन व्यक्तिलाई थाहा थियो कि परिवार त्यहाँ लुकिरहेको छ र उनीहरूलाई खाना खुवाउने र विदेशमा के भइरहेको थियो भन्ने बारे जानकारी दिन तिनीहरू जिम्मेवार थिए। केही समय पछि उनीहरूको संगति भयो जब अर्को यहूदी परिवार, पेल्स र पछि परिवारको दन्त चिकित्सक सामेल भए। सबै कुरा डायरीमा रेकर्ड गरिएको छ जुन एनाले उनीसँग ल्याए र तनाव पनि धेरै व्यक्तिहरू र यती धेरै दवावको साथ सानो ठाउँमा बस्नको कारण उत्पन्न।
एक व्यक्तिगत डायरी महान छ किनकि आत्म-लेखनले हाम्रो व्यक्तित्वका पक्षहरू र सम्पूर्ण संसारमा हाम्रो हेराईहरू प्रकट गर्दछ र यसैले, हामी बन्धनमा परेका यी मानिसहरूले बिताएका ती दिनहरू बनाउन सक्छौं जुन पुनर्निर्माणले हामीलाई एक विशाल संसारको झलक देखाउँदछ। अन्तिम रेखा अगस्त १, १ 1 .1944 मा लेखिएको थियो, लुकेका कोठामा प्रवेश गरेको दुई वर्ष भन्दा बढी पछि।
August अगस्तमा, पुलिस र एसएस प्रवेश गरे र तिनीहरू सबै पक्राउ परे। केही दिन पछि ट्रान्जिट क्याम्पमा स्थानान्तरण गर्न त्यहाँ एक लाखभन्दा बढी यहूदीहरू पहिले नै थिए। जसले तिनीहरूलाई मद्दत गरे उनीहरूको राम्रो भाग्य थिएन तर घर फर्कने, कागजातहरू, परिवार फोटोहरू र घरमै छोडीएको डायरी संकलन गर्न सक्षम थिए। तिनीहरूले युद्धको अन्त्य पछि फर्कने आशामा सबै कुरा बचत गरे।
यो निश्चित रूपमा थाहा छैन कि ती सबै नहरमा रहेको घरमा लुकेका थिए भन्ने जानकारी कसरी फुटेको थियो। त्यो वर्षको सेप्टेम्बरमा समूह Auschwitz मा निर्वासित थियोत्यतिखेर आना पहिले नै १ 15 वर्षको भइसकेको थियो। मौसम पछि उनीहरूलाई बर्गन बेलसनमा सारियो, जहाँ उनकी आमा भोकमरीको कारण मर्नुभयो, यद्यपि टाइफस, टाइफाइड र अन्य कीटनाशकको ​​सामान्य स्थिति थियो त्यसैले यो विश्वास गरिन्छ कि ती बहिनीहरू यी रोगहरूबाट मरेका थिए।
त्यहाँ हुनु पहिले उनको दिदी, मार्गोट, मरे र दिन पछि अना। केही हप्ता पछि शिविर अ the्ग्रेजीले स्वतन्त्र गर्यो।
डायरी र संग्रहालय
सत्य आनाको बुबा हो, ओटो फ्रान्क, त्यहाँ कुनै मरेको थिएनoy युद्दको अन्त्यमा उसको पहिलेका कर्मचारीहरु उनीहरुलाई घरबाट स had्कलन गरेको थियोलाई एक हत्या भएको छोरीको आत्मीय विचार पढ्दा अचम्म लाग्यो।
पहिलो नोटको प्रकाशन १ 1946 1950 मा थियो र तिनीहरू १ XNUMX .० मा जर्मनी र फ्रान्समा प्रकाशित भएका थिए। त्यसबेलादेखि यो धेरै लोकप्रिय भयो, योaबन्यो खेल्नु र सन् 1959 मा चलचित्र.
संग्रहालय घर प्रिन्सेngग्राक्ट नहरमा अवस्थित छ, एम्स्टर्डमको बीचमा। यो एक हो १th औं शताब्दीको घर र यसको ढोका सन् १ 1960 .० मा संग्रहालयको रूपमा खोलियो। त्यहाँ छ एनी फ्रान्कको जीवन र ऐतिहासिक अवधिमा स्थायी प्रदर्शनी र आज यो नेदरल्याण्डमा तीन सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको संग्रहालयहरू मध्ये एक हो।
त्यस घरमा धेरै तलाहरू थिए र ती मध्येका लुकेका कोठाहरू थिए जहाँ उनीहरू नाजीहरूबाट शरण लिए र उनीहरूले बोलाए Achterhuis वा गोप्य एनेक्स यो बाहिरबाट देखिएको थिएन र आकारमा करीव square 46 वर्ग मिटर थियो।
भ्रमणको क्रममा तपाईंले यो सानो एनेक्स, अन्नाले अर्को परिवारको बच्चासँग साझा गरेको कोठा, साझा कोठा र व्यक्तिगत सामान, फोटोग्राफहरूको प्रदर्शन र अरू।
यद्यपि स visitors्ग्रहालय १ 1960 .० मा खोलियो तर आगन्तुक संख्याका कारण यो बन्द रह्यो र १ 1970 .० र १ 199 XNUMX urb बीचमा पुनः नवीकरण भयो। २००१ मा रानी बिएट्रिक्स आफैंले यसलाई पुनः खोले अधिक ठाउँ, एक पुस्तकालय र एक क्याफेटेरियाको साथ। सबै पुन: निर्माण कसरी यो 1940 मा देखियो।
स्थान: प्रिन्सेngग्राक्ट २263-२267।। प्रवेशद्वार वेष्टमार्क, २० को कुनामा छ।
त्यहाँ कसरी पुग्ने: एम्स्टर्डम सेन्ट्रल स्टेशनबाट २० मिनेट पैदल यात्रा, अरू केहि पनि छैन, तर तपाईं त्यहाँ ट्राम १ or वा १ by मा पुग्न सक्नुहुनेछ, वेस्टमार्क स्टपमा पुग्दै।
घण्टा: अप्रिल १ देखि नोभेम्बर १ सम्म प्रत्येक दिन बिहान 1 देखि १० बजेसम्म र नोभेम्बर १ देखि अप्रिल १ सम्म हरेक दिन बिहान 1 देखि साँझ and सम्म र शनिबार साँझ9बजेसम्म खुला रहन्छ।
मूल्य: प्रति वयस्क १० युरो र १० देखि १ from सम्मका बच्चाहरूलेeयूरो भुक्तान गर्छन्। रिजर्भेसन c० यूरो सेंट लिइएको छ।
त्यहाँ अडियो गाईडहरू र निर्देशित टुरहरू छन्। तपाईं परिचयात्मक कार्यक्रमहरूको लागि साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ जुन आधा घण्टा मात्र चलेको छ र तपाईं WWII को संदर्भमा आनाको जीवनको झलक दिनुहुन्छ। यो अ in्ग्रेजीमा छ र संग्रहालय भ्रमणमा समावेश छ।
दुई महिना अघि मिति र समय छनौट गरेर तपाईं अनलाईन टिकट किन्न सक्नुहुनेछ। उनीहरूलाई पहिल्यै किन्ने प्रयास गर्नुहोस् किनभने त्यहाँ धेरै माग छ, विशेष गरी यदि तपाई साताको अन्त्यमा वा बिदामा जानुहुन्छ भने। तपाइँ एक पटकमा १ 14 टिकट किन्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » एम्स्टर्डम » एनी फ्रान्क हाउस